Sekoly tsy miankina: 25% ny tahan’ny fiverenana an-dakilasy ho an’ny 2020-2021 - ewa.mg
Sekoly tsy miankina: 25% ny tahan’ny fiverenana an-dakilasy ho an’ny 2020-2021
News - Sekoly tsy miankina: 25% ny tahan’ny fiverenana an-dakilasy ho an’ny 2020-2021
Efa any an-dakilasy,
amin’izao fotoana izao, ny mpianatra eny amin’ny sekoly tsy
miankina misantatra ny taom-pianarana vaovao 2020 –
2021. Betsaka ireo sekoly nitondra
faisana noho ny valanaretina. Ny ray
aman-dreny koa tojo fahasahiranana ka nampiato ny
Nanapa-kevitra ny hisantatra ny
taom-pianarana 2020-2021, ny fiandohan’ny herinandro teo ireo
sekoly 400 tsy miankina mivondrona ao anatin’ny Association des
instituts laïques pour l’éducation (AILE) manerana ny Nosy, araka
ny fanazavan’ny tale nasionaliny, Rakotomalala Célin, omaly. Satria
ny minisitra vaovao misahana ny Fanabeazam-pirenena, nilaza fa
notazonina ny tetiandro teo aloha ary mifarana ny 30 jona lasa teo
ny taom-pianarana 2019-2020 ary roa volana sy tapany aorian’izay no
misokatra ny taom-pianarana vaovao. Ireo kilasy
« intermédiaire » no miditra tamin’ity herinandro ity fa
ireo mbola miatrika ny fanadinam-panjakana BEPC sy bakalorea, ny
volana novambra vao hiverina an-dakilasy. Raha ny zavatra tsapa
taorian’ny fandraisana ny fisoratana anarana ho an’ny
taom-pianarana vaovao, 25% sisa ny tahan’ny mpianatra niverina
an-tsekoly fa sahirana ny ray aman-dreny ka tsy afa-manoatra izy
ireo. Tranga iraisan’ny ankamaroan’ny sekoly tsy miankina ireo
manoloana ny krizy ara-pahasalamana nitarika krizy sosialy sy
ara-toekarena teto amintsika. Manarina ny fari-pahaizan’ny
mpianatra no himasoana voalohany aloha amin’izao fidirana izao.
Noterena ny sekoly hanome
ny taratasy fiantsoana
Nisedra olana lehibe koa ny sekoly
tsy miankina manoloana ireo mpiadina tamin’ny fanadinana CEPE. Maro
tamin’ireo ray aman-dreny no nanery fotsiny ny talen-tsekoly hanome
ny taratasy fiantsoana mandritra ny CEPE nefa tsy nanefa ny
saram-pianarana feno. Taorian’ny kabarin’ny filoha momba ny tsy
tokony hihazonana ny taratasy fiantsoana, nanararaotra ireo ray
aman-dreny tsy nitsinjo ny karaman’ny mpampianatra, hoy ny
fanambarany. Lasa nibaby vesatra lehibe ny sekoly vokatr’izay. Ny
ankamaroan’ny sekoly tsy miankina tany Atsimondrano tsy nanao
famerenana mialoha ny fanadinana CEPE satria tsy nanam-bola
hanakaramana mpampianatra intsony ny tompon-tsekoly. Nisedra avy
hatrany ny CEPE ireo mpiadina rehetra.
L’article Sekoly tsy miankina: 25% ny tahan’ny fiverenana an-dakilasy ho an’ny 2020-2021 a été récupéré chez Newsmada.
Antsirabe : Maty voatifitry ny pôlisy le Baroda, jiolahy raindahiny
Jiolahy raindahiny antsoina hoe le Baroda no lavon’ny balan’ny pôlisy teto Antsirabe, maty tsy tra-drano ity jiolahy ity, bala telo no niantefa teny amin’ny vatany. Efa volana maromaro no narahi-maso akaiky ity jiolahy maty voatifitra ity, raha ny fanazavana nomen’ny pôlisy. Tao Betafo izy no nipetraka rehefa avy namita ny saziny tany am-ponja. Raha ny fanazavana mantsy dia mpamerin-kelokoa ity jiolahy ity ary efa niditra am-ponja matetika, ary efa avy eny Tsiafahy . Herinandro teo izao izy no narahi-maso akaiky, ka teo am-panomanana fanafihana izy izao lavo izao. Ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy dia nifanenjahan’ny pôlisy tao Andranovisy le Baroda sy ny namany roa lahy. Nifanena tamin’ny pôlisy nanao akanjo sivily le Baroda ary nikasa hanindrona Sabatra azy. Niaro tena ny pôlisy ka voatery nitifitra. Ireo namany roa lahy kosa tafaporitsaka. Nambaran’ny “commissaire central” Raholisoa Patrick fa nanao vava le Baroda talohan’izao nahafaty azy izao, nilaza fa tsy maintsy hamono pôlisy iray. Fantatra fa vao avy nanendaka teo Andranomaimbo le Baroda sy ny namany, vao tsy ela akory izay, ary voarohirohy amina resaka famakian-trano nisesisy tao Antsenakely. Miisa efatra kosa ny didy mampaka azy. Araka ny fanazavana hatrany dia naman’ilay jiolahy antsoina hoe le Gena, maty voatifitra koa, le Baroda. Le Gena dia vao roa volana izay no nahavoatifitra azy, tao Andranovisy ihany koa. Samy any am-ponja ny vadin’izy roa lahy ireo, fa mpiray tsikombakomba sy mpivarotra ny entana halatra azony. Andry N.L’article Antsirabe : Maty voatifitry ny pôlisy le Baroda, jiolahy raindahiny a été récupéré chez Midi Madagasikara.
BEACH SOCCER – «CAN 2018» :: Nosakanan’i Maraoka ny lalan’ ny Barean’i Madagasikara
Nihintsana teo am-pototry ny dingan’ny manasa-dalana ny ekipam-pirenena malagasy, taranja baolina lalaovina amina tora-pasika, nandritra ny lalao farany teo amin’ny dingan’ny fifanintsanana ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny CAN Beach Soccer fa tsy araka ny voasoratra teto amin’ny gazety, omaly. Ialana tsiny indrindra amintsika mpamaky noho io fifandisoana io. Resin’i Maraoka, tamin’ny alalan’ny isa 6 noho 4, ny Barean’i Madagasikara, tamin’ity lalao farany ity ka nahatonga azy ireo tsy tafiditra ho isan’ireo ekipa efatra hanohy ny fifaninanana. Faharesena roa (Ejypta sy Maraoka) sy fandresena tokana (Côte d’Ivoire) no nanjo ny ekipam-pirenentsika tamin’ity fifaninanana kaontinantaly ity. Voatery hiatrika ny lalao fanasokajiana ny Barean’i Madagasikara, manomboka anio. Hiady ny laharana fahadimy manoloana ny ekipan’i Tanzania, izay nitana ny laharana fahatelo teo amin’ny vondrona B, izy ireo. Ny ekipan’i Ejypta sy Maraoka no hisolo tena ny vondrona misy antsika eo amin’ny dingan’ny manasa-dalana, raha i Sénégal sy Nizeria kosa no hiaro ny voninahitry ny vondrona B. Hotanterahina, anio, ny manasa-dalana ilany, raha rahampitso kosa ny manasa-dalana iray, izay samy hialohavan’ ny lalao fiadian-toerana avokoa. L’article BEACH SOCCER – «CAN 2018» :: Nosakanan’i Maraoka ny lalan’ ny Barean’i Madagasikara est apparu en premier sur AoRaha.
Fikambanana AAM: “Tsena ho an’ny reny” hanohanana ireo sahirana
Manome fotoana ho an’ny rehetra ao amin’ny espace Dera eny Tsiadana ny Association accueil Madagascar (AAM), ny 24 mey ho avy izao,amin’ny “Tsena ho an’ny reny” (Bazar des mamans), andiany faha-18. Tsiahivina fa ny fikambanana AAM tantanan’ny Rtoa Raoera Chandoutis, manampy ireo beantitra, ny moana sy ny marenina, ny zaza tratran’ny homamiadana sy tsy misitraka ny zony, ny kamboty tsy misy mpiahy, ny ady amin’ny fampiasana zaza tsy ampy taona sy tsy mandeha mianatra intsony. Manampy sy mampita fanabeazana amin’ireo sokajin’olona ireo ny AAM, mampifaly azy ireo ihany koa. Miaraka amin’izany fanampiana izany ny fampitaovana.Ankatoky ny fetin’ny reny io fotoana io hiantsoan’ny AAM ny vonona handray anjara io. Ho hita amin’io ireo asa tanana samihafa, ny fitafiana, ny kojakoja fampiasa ao an-tokantrano, ny haingo isan-karazany fanaon’ny vehivavy, sns. Hanampiana ireo sahirana sy mahantra ireo ny vola azo avy amin’izany. Nitsangana ny taona 1968 ny AAM, mifototra amin’ny fihavanana sy ny kolontsaina malagasy. Ampolony maro ireo vehivavy mpikambana ao aminy. R.MathieuL’article Fikambanana AAM: “Tsena ho an’ny reny” hanohanana ireo sahirana a été récupéré chez Newsmada.
Can 2019 – Lalao fanomanantena: rahampitso no hidona amin’i Luxembourg ny Barea
Vonona ny Barean’iMadagasikara, hiatrika an’i Luxembourg, eo amin’ny lalao fanomanantena, ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”, taranja baolina kitra. Fihaonana hotanterahina, rahampitso alahady, ao amin’ny kianja Luxembourg, manomboka amin’ny 8 ora alina eto Madagasikara.Efa tonga ao Paris avokoa ireo mpilalao rehetra, nanomboka omaly zoma. Toerana anaovan’izy ireo ny fampivondronana. Raha tsy misy ny fiovana, amin’ity asabotsy ity vao hihazo an’i Luxembourg ny delegasiona malagasy. Tsiahivina fa niverina ao anatin’ny Barea de Madagascar ry Mamy Gervais sy i Dax.Raha tsiahivina, aorian’ity lalao hikatrohana amin’i Luxembourg ity, mbola hifandona amin’i Kenya ny Barean’i Madagasikara, ny 7 jona ho avy izao. Aorian’io, hiverina eto Madagasikara ka hisy ny lalao fanomanana hifanaovan’ireo samy mpilalaon’ny Barea, ny 10 jona. Hihazo an’i Maraoka indray ny Barea, aorian’izay, hiatrika fampivondronana. Hisy ny lalao fahatelo hikatrohany amin’i Maoritania, ny 14 jona, mialoha ny hihazoany an’i Egypta, hiatrehany ny “Can 2019”. Tompondaka L’article Can 2019 – Lalao fanomanantena: rahampitso no hidona amin’i Luxembourg ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Mpivady 41 isa no nahafeno ny antontan-taratasy ilaina nanatanteraka fisoratam-panambadiana faobe tao Ambatomainty, boriborintany fahadimy, ny herinandro lasa teo. Na maro aza ny namaly ny antso avy amin’ireo fokontany 27 ao anatin’ny boriborintany fahadimy, ireo ihany no nahavita ny antontan-taratasy ilaina. Vokatry ny ezaky ny boriborintany avokoa no nahafahana nanatanteraka ity hetsika natao maimaimpoana ity, hoy ny delegen’ny boriborintany fahadimy, Rakoto Emmanuel Richard.Notontosaina ny herinandro teo ny fanamboarana ny lalankely izay mampitohy ny fokontany Ambodihady sy fokontany maromaro eo anivon’ny boriborintany fahenina. Nifarimbonan’ny ekipa teknikan’ny boriborintany fahenina sy ny ekipa avy tao amin’ny asa vaventin’ny kaominina ny asa. Ny ekipan’ny boriborintany no naka sy nanangona ary nitaona ireo vato nesorina tamin’ny sisin-dalana na “trottoir”. Ny ekipa avy tao amin’ny DTP kosa no nandrafitra ny vato hirindra tsara ho rarivato. Vato avy nalan’ny Colas tamin’ny sisin-dàlana ireny no nahavitana lalankely. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.
Fametrahana ny tany tan-dalàna: malahelo sy menatra amin’ny ataon’ny fitsarana ny KMF/Cnoe
Tsy nitsitsy fitenena ny eo anivon’ny KMF/Cnoe, manoloana ny fametrahana ny tany tan-dalàna. Anisan’ny notsikerain’izy ireo ny fitsarana.“Foto-kevitra iray iainan’ny KMF/Cnoe ny fanajana lalàna. Ho anay, rehefa izay ny fanapahan-keviny: mampalahelo sady mahamenatra. Mampalahelo sy mahamenatra tsy hoe tsy nahavoa na resy izahay fa Repoblika sy fanjakana tan-dalàna no iainantsika nefa mahasahy milaza fa tsy mahefa ny raharaha ny mpitsara.”Io ny nambaran’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, notarihin’ny filoha nasionaliny, Andriamalazaray Andoniaina, teny Antanimena, afakomaly, manoloana ny tsy fahefan’ny Filankevi-panjakana mitsara ny fitoriany amin’ny hanafoanana ny didim-panjakana fihaikana mpifidy vaventy sy ny hanafoanana ny fifidianana loholona amin’ny 11 desambra.Ny fanambaran’ny Filankevi-panjakana fa tsy mahefa hitsara ny raharaha amin’izay io fitoriana izay no tsy nampoizina. Efa nisy ny ady toy izao tany amin’ny taona 2008. Angamba, mety ho diso fitadidy ireo mpitsara. Nisy didim-panjakana navoakan’ny Filankevi-panjakana tamin’izany. Amin’ny maha didy fakan-tahaka azy fotsiny, mahamenatra ny nambaran’ny fitsarana ho tsy mahefa ny raharaha. “Mahamenatra izany fa tsy maninona: izay ny rafitra sy ny lalàna, hajaina ny lalàna”, hoy izy.Tsy ny voka-pifidiana no zava-dehibeRehefa mifidy ny olona, tsy ny voka-pifidianana no zava-dehibe fa ny fahazoana maneho hevitra amin’ny latsa-bato. Izay famoahana ny safidy avy amin’ny tsirairay izay no manambara fa tany tan-dalàna sy fanajana ny demokrasia, manoloana ny filazana fa tsy hanova ny voka-pifidianana ny tsy fahafenoan’ny mpifidy vaventy amin’io fifidianana loholona io.Nilaza ny mbola hivory sy handinika tsara ny KMF/Cnoe na hanara-maso na tsia ny fifidianana. Tsy azo entina amin’ny hafanampo sy ny hataitairana ny raharaham-pirenena.R.Nd.L’article Fametrahana ny tany tan-dalàna: malahelo sy menatra amin’ny ataon’ny fitsarana ny KMF/Cnoe a été récupéré chez Newsmada.
Fandaminana sy fanadiovana: novahan’ny CUA ny olan’ny fitohanana sy ny fako eny Mahazo
Mitohy ny asa fanatsarana sy fanadiovana ny Tanàna, tanterahin’ny eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Namaha ny olana eny amin’iny faritr’i Mahazo sy ny manodidina iny ny eo anivon’ny CUA, omaly. Anisan’ny mampitaraina ny rehetra ny fitohanan’ny fifamoivoizana sy ny fako eny an-toerana. Faritra ifandraisan’ny CUA sy ny kaominina Ambohimangakely ka nametrahan’ny roa tonta fiaraha-miasa ny fijerena ifotony ny zava-misy. Manoloana izany, nanomboka omaly avy hatrany ny fanadiovana ny toerana sy ny nametrahana ireo dabam-pako vaovao miisa roa. Nakisaka koa ny toerana fandraisan’ny mpandeha ny taxi-be mba hampalalaka ny toerana.Nilamina ireo mpivarotra teny MahazoNisy ny fanentanana sy fandresena lahatra ireo mpivarotra hanaja ny fandaminana ka nilamina izany.Tsiahivina fa niara-niasa nanatanteraka izany fandraisana andraikitra izany ny eo anivon’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena. Ny avy amin’ny distrika sy ireo tompon’andraikitra rehetra. “Ahafahantsika mitondra fampandrosoana ny Tanànantsika ny fiaraha-mientana tahaka izao”, hoy ny hafatry ny ben’ny Tanàna.Araka izany, mitohy hatrany ny ezaka fandaminana, fanatsarana sy fandrindrana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.Synèse R. L’article Fandaminana sy fanadiovana: novahan’ny CUA ny olan’ny fitohanana sy ny fako eny Mahazo a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4513 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4513 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Fiarakodia: mandeha gazoala ny 75,1 %, efa niasa na vaovao
Mitombo hatrany ny varotra fiarakodia efa niasa avy any ivelany ampidirina eto Madagasikara, nanomboka ny taona 2016 hatramin’izao, araka ny tarehimarika nomen’ny Instat. 51,4 % ny fiara fampiasan’olon-tokana , 21,7 % ny ho an’ny fitaterana iombonana. Eto Antananarivo sy ny manodidina ny ahitana betsaka ireo karazana fiara ireo miampy ny moto. Karazana Mercedes (Sprinter) sy Hyundai no betsaka indrindra, be mpividy. Mercedes Sprinter ho an’ny fitateram-bahoaka, izay hita ny fitombony eto an-dRenivohitra sy misahana ny fitaterana amin’ny zotra nasionaly. Raha amin’ny fiara vaovao indray, ny Toyota no mitana ny laharana voalohany.Mandeha gazoala ny maro anisa indrindra, fiara efa niasa na vaovao, 75,1 %. Raha oharina ny tany amin’ny taona 2010, betsaka ampidirina eto ny fiara efa niasa latsaky ny dimy taona, 26 % ; nihena betsaka kosa ireo 10 na 15 taona, saingy mbola maro anisa ny miasa eo amin’ny fitaterana.Fehiny: endriky ny toekarena tsy mihodina ny varotra fiara efa niasa. Singa iray mandoto ny tontolo iainana ny fahamaroan’ny fiara mandeha amin’ny gazoala, ary tsy maharaka ny fahamaroan’izy ireo ny lalana eto Antananarivo, antony iray mampitohana ny fifamoivoizana. R.MathieuL’article Fiarakodia: mandeha gazoala ny 75,1 %, efa niasa na vaovao a été récupéré chez Newsmada.